သူကြီးကိုတောင်းဆိုခြင်း(သို့) မေးမြန်းခြင်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Letter to The Editor » သူကြီးကိုတောင်းဆိုခြင်း(သို့) မေးမြန်းခြင်း	44
Posted by snow white on Jun 28, 2012 in Letter to The Editor | 44 comments
“သူကြီးစနိုးတို့မန်းဂေဇက်ကိုမန်ဘာစ၀င်တုံးက (၄000)ဘဲ၇တယ် နော် ခုမှမန်ဘာဝင်တဲ့ သူတွေ(၅000)ဖြစ်သွားတယ်နော် သူကြီးဘာလို့လည်းဟင် စနိုးရွာထဲ မ၀င်တာတော်တော်လေးကြာသွားပြီ တကယ်မသိလုိ့မေးတာပါ(၅000)ဖြစ်သွားတာ ကြာပြီလားဟင် စနိုးမေးချင်တာ ကဘာကြောင့်(၅000)ဖြစ်သွားတာလည်း သူကြီးများထီပေါက်လို့လား ဒါမှမဟုတ် သူကြီးစိတ်ကြည်နေတုံး တယောက်ယောက်က (၅000)ပေးလိုက် ရကောင်းမလား လို့အကြံပေးလို့ လားဟင် သူကြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော် ” မှားတာ ရှိတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော် သိချင်စိတ်ကို စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမထားတက်လို့ မေးမြန်းလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်ကိစ္စ ကြောင့်မှမေးမြန်းခြင်းမဟုတ်ပါ မကျေနပ်လို့မေးမြန်းခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ သူကြီးသိချင်လို့သာမေးတာနော်
kai says: ဘာမှစိတ်ထဲမရှိပါဘူး..
ရွာသူား၈ထောင်ကနေ… ၉ထောင်ဖြစ်အောင်..နည်းနည်းပိ်ုပေးလိုက်မှတွေးပြီး.. ပေးလိုက်တာ..
စဉ်းစားကြည့်တော့မှ.. လူ၁ထောင်တက်လာတာမှာ.. တယောက် ကျပ်၁ထောင်တိုးလိုက်တော့..
the best says: မြန်မာငွေတွေ ဖေါင်းပွလို့ဒေါ်လာကိုင်နေတဲ့ သူကြီး တွက်ချေကိုက်ပြီး ပျော်နေတာပါ။
တစ်ရွာလုံးကိုပေးရမဲ့ မြန်မာငွေ ကို ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ရင် သူကြီးဘယ်လောက် မြတ်သွားသလဲ။
မြန်မာငွေ ကိုင်တဲ့သူတွေ ညစ်နေပြီ။ သူကြီးကတော့ပျော်နေပြီ။
TNA says: အောင်မယ်လေး သူက ၄၀၀၀ ပဲရလို့တဲ့။ သများတို့တုန်းက ၃၀၀ ပဲရပါတယ်ဆိုနေ။ ဒီအနာဟောင်းပဲလာ လာဆွနေတယ်။ သဂျီး ၄၇၀၀ ပြန်ပေး။ အထုပေး။ အညန်ပေး။
myanmarcitizen says: ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပ့ါ ကိုယ်တွေများ သနားစရာကောင်းလိုက်တာ။ :-(
manawphyulay says: ခုမှ ပြန်ချမယ်လေ ဘာလေးမလုပ်နဲ့ … နိုင်ငံတော်ကြီး ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတော့ ရွာကြီးလဲ ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်ပြီးမှ ဘာပြန်ပြင်ချင်တာလဲ…
ရွာသူရွာသားအဟောင်းတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲပေးမှပေါ့ အသစ်တွေကို မက်လုံးပေးပြီး တိုးပေးတယ်။ အမှန်ဖြစ်သင့်တာက ရွာခံတွေကို နှစ်ဆတိုးပေးသင့်တာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား…. :P
TNA says: ဘရာဗိုပါမနောရေ။ အကြီးကြီးထောက်ခံတယ်။ ရဲဘော်ဆက်လုပ်။
မမ အညာသူ says: ညာတို့၇ွာကသူကြီးကသဘေားကောင်းပြီတာပါနော်
ko khin kha says: ပြောတော့ပြောချင်တယ် သူကြီးနဲ့လည်းမရင်နှီးသေးတော့
မပြောတော့ပါဘူး သူကြီးတို့ခေတ်ဘဲ လုပ်သမျှပေါ့။
ရွာထဲသတင်းပျံပြီး ဆူပူကုန်ရင် သူကြီးထိန်းရခက်မှာဘဲစိုးတာပါ။
snow white says: တစ်သိန်းပြည့်ပြီးတဲ့သူတွေကိုမတိုးပေးနဲ့တော့သူကြီး စနိုးတို့လို သူမျိုးတွေသာပေးသင့်တယ် ။
ရဲစည် says: စဂါးမစပ် တသိန်း ဘယ်သူများ ပြည့်ပီးသတုန်း
အဲလာလေး သိချင်ထှာ……………………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2275
htoosan says: သိသလောက် လေးပေါက်၊ etone ၊ မနောဖြူလေး ။
အောက်ဆုံးက top 10 ကြည့် ရင် etone နဲ့ လေးပေါက် တို့ က နောက်တစ်သိန်း နား နီးနေကြပြီ။ များများ အားပေးလိုက်ကြစို့ ဗျို့။
zarzarhtwe says: ကိုထူးဆန်းရေ
Was this answer helpful?LikeDislike 8248
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ဘူး တစ်သောင်းတန်ထုတ်တာကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် 5000လို့တိုးပေးလိုက်တာနေမှာ။
သူကြီး ကငွေဆယ်သိန်းထက်တအား ငိုတာဘဲ လက်ငင်းပေးရတာလဲဟုတ်ဘဲနှဲ့။
etone says: အဲ ..စနိုးရေ .. တိုးတိုး ယူထားတာမဟုတ်ဘူး .. သူစိတ်ကောင်းဝင်နေတုန်းလေး ပေးတာကို … ။ ဟိဟိ …
အရင်က မန်ဘာဝင်ရင် ထောင်ဂဏန်းတောင် မရဘူးမှတ်တယ် … ဟိ .. ။ :P
mayjuly says: ငွေရေးကြေးရေး အကြောင်းပြောနေဂျပါလားး…
တဂျီး ချေတနာကို ဆော့ကစား ကြပါ နဲ့နော်…
ဦးလေး တဂျီးက ချိတ်ပြောင်းတွားမှ ဖင့် ဒက်ခ …
ဟိဟိ ၁၀ ယူပီး ကျန်ဘီ …
ငပွကြီး says: အခုမှ စ၀င်တဲ့သူက ၅၀၀၀ ရတယ် ..
၂ ခါလည်ကျော်နေတဲ့ ကျုပ်က အခုမှ ၃၈၃၁ ဆိုတော့ …: ( :?
laypai says: သဂျီး ကျနော် မန်ဘာ ၀င် တုံး က ဘယ်လောက် ပေး လိုက် လဲ မ မှတ် မိတော့ လို့။
ဘဲဥ says: လောလောဆယ် တစ်ဆယ်သေချာလို့ ယူတွားဘီဗျာ
char too lan says: မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၉ခုနှစ် ၅လပိုင်းမှာ မန်ဘာစ၀င်တော့ ၄၅၀ ရတာပါ ဒါတောင်ဘူးမှဘာသံမှမထွက်ဘူးရယ်
ဒီကြားထဲ ပွိုင့်လိုဂျင်လို့ရေးဒယ်ဆိုပီး မကြာခဏ ခဏခဏ ပြောခံထိနေကြတာရယ်
ဒီလိုသာမေးမိလို့ဂဒေါ့……………………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2243
မာဆတ် ၂ ဆက်ရှင်ဖိုးလောက်စီတယ်
တူဂျီးတော် အဟတ် အဟတ်
သားဦး၊မြေးဦး says: ကျနော်တို့ စဝင်တော့ ၃၀၀ကျပ်ဘဲရသဗျာ။(၄၇၀၀)ကျပ်ပြန်ဖြည့်ပေးပါအုံး။
ဟိ. ဟိ. နောက်တာပါဗျ။
ဖိုးထောင် says: အဟင့် များတို့ဝင်တုန်းက ဘယ်လောက်မှန်းတောင်မသိပါဘူး အခုမှ ၃၀၀၀ ကျော်ပဲရသေးတယ် ကြည့်ပါလား အခုပြောရင်းဆိုရင် သူကြီးက နှစ်လုံးပူးကြီးနဲ့လာထောက်နေပြီ အမလေး အူယားပြီး ကြောက်တယ် ပြန်ဖြည့်ပေး အဟင့်
may flowers says: သဂျီးနော် ပြောထားမယ် ဒီမှာဝင်ရေးနေတာ ငွေရေးကြေးရေးအဓိမဟုတ်ဘူး………ပိုက်ဆံလိုချင်လို့
ကျွန်တော်လည်း မင်ဘာ ဝင်ချင်လို့
မန့်လေး နဲ့ဘဲ ဖြေပေးလိုက်ပါ
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ကိုယ့်ဆာသိတာလားမသိတာလား……
မောင်ပေ says: သားသားလေး မောင်ပေလဲ မေးချင်လို့ ပါ ခင်ဗျ
သဂျီး က စီအိုင်အေ မှာ ဘာရာထူးလဲ ဆိုတာကို….
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ဒေါ်စနိုးရေ……
laypai says: ကိုရှမ်း ပြော တာကို ထောက် ခံ ပါတယ်။
မ မန့်ဘဲ + ပေးပြီး တော့ ကျေနပ်ချင် တာပါ။
ဒါပေမဲ့ + ပေးတာ ထက် ရေး ပြီး submit comment လုပ်တာ က ပို မြန်တယ်။
+ ပေး ရင် page တစ်ခုလုံး က fail ( မှိန် ) ပြီး ၃ မိနစ် လောက် ဘာမှ လုပ်မရဘူး။
စက်ကြောင့် လား ကော်နက်ရှင် ကြောင့်လား အပစ် မပြောတော့ ပါဘူး။ မြန်လဲ မြန် ၁၀ လဲ ရတဲ့ …..ဟဲ..ဟဲ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျုပ်ကတော့ ငါးထောင်ပြည့်ဘို့ တနှစ်ခွဲလောက်ကြာခဲ့တယ်မှတ်တယ်..။
ကျုပ်နဲ့အတူမင်ဘာဝင်တဲ့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းခမျာ အခုထိ နှစ်ထောင်မပြည့်သေးရှာဘူး…။ :D
the best says: ရွာထဲကိုလာရတဲ့ ခရီးစရိတ်၊ ရွာထဲလျှောက်ကြည့်တဲ့စရိတ်
ရွာထဲကပြန်ထွက်တဲ့အထိ ကုန်လိုက်တဲ့စရိတ်တွေ တွက်ကြည့်ရင်
သူကြီးသနားပြီး အရမ်းတိုးပေးလို့မပြောတော့ပါဘူး။
သူကြီးသနားပြီး အရမ်းတိုးပေးမှာစိုးလို့မပြောတော့ပါဘူး။
ရဲစည် says: ဟမလေး
ဒီရွာထဲစဝင်တော့ ဒါတွေတလုံးမှ မသိဘူး…………………….
ပိုစ့်တင်ရင် ဘယ်လောက် မန့်ရင်ဘယ်လောက် ခုနောက်ပိုင်းမှ
သေချာသိရတာ မမြော်မှန်းရဲပါဘူး တသိန်းဆိုတာကြီး သေချာတွက်ရင်
ကွန်းမင့်၈၀၀၀လောက်နဲ့ ပို့စ်အပုဒ်ရေ ၅၀၀လောက်များ ရေးရမလားမသိ lol
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3107
Foreign Resident says: သနားအောင် ပြောလိုက်ဦးမယ် ။
အဘ တို့လို နိုင်ဂျန်ဂါးမှာ တကျွန်း ကျ နေတဲ့သူတွေကိုကျတော့ ။
သူကြီးက မပေးဘူးတဲ့ ။ အဟင့် ဝမ်းနည်းထှာ ။
htoosan says: ရွာသူားဟောင်းတွေ ဆူမှာ စိုးလို့တဲ့ မန့်တာ ၁၅ ဖြစ်သွားပြီ ။
မြန်မာပြည် က အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေ သူကြီး ကို အကြံပေး ခန့်သင့်တယ် ။ ရွာဆူ ဆန္ဒပြမှာ စိုးလို့ မန့်တာ လေး တိုးပေးလိုက်တယ် ။ နောက်မှ ဘယ်တော့ ပြန်လျှော့ဦးမလဲ မသိဘူး … :grin:
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: မဟုတ်ဘူးဦးထူးဆန်းရေ……
amatmin says: ၁၅ ကျပ်တိုးပေးတာ ဟုတ်မဟုတ်.
ဒီပို့စ်မှာ တခါတည်း စမ်းမန့်လိုက်အုန်းမယ်..
mocho says: ဟုတ်တယ် အဘ ဖောရေ သဂျီး က မျက်နှာလိုက် တယ် ၊နိုင်ငံ ဂျား က ရေး ရ တာလဲ မျက်စိ ညာင်း ၊ ခေါင်း မူး ရတာ ချင်း အတူတူ ပါပဲ၊ ဟွန်း …..ဂီဂီတို့ ..အရီး လတ် တို့ ရေ ..တကျွန်း တွေ ပေါင်းပြီး တန်းတူ အခွင်းရေး တောင်း ကြရအောင် …ဟိ…. ဟိ……ပြေးပြီ
Azzurri says: ဟုတ်တယ်ဗျို့ …ထောက်ခံပါတယ်…
hein latt says: ဒါနဲ. ဇဂါးမစပ် အာဗာတာရဲ.အပေါ်ထောင့်ဂ ဘာဂဏန်းတွေဒုံး ကွန်မန်.အရေအတွက်လည်းဟုတ်ဖူး….
ပြောရင်းဆိုရင်း ၁၅ ကျပ်ယူဒွားဗီ….ဒီဒီ့ဒီ…..
antimoe says: ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာ…
ဇောက် ထိုး says: သားသား ဘာမှ သိတော့ .. ဘာမှပြောရဘူး.. အဲဒါအေးတာပဲ။ သိပြောနေရဦးမှာ.. တကယ်တော့ မသိမှုအ၀ိဇ္ဇာက ကမှကောင်းတာ။ ဒါကို လူတွေက မကောင်းဘူး မကောင်းဘူးနဲ့ပြောကြတာ။
ဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်… သူတို့လိမ်နေတာကို မသိမှ ကြည့်ကောင်းတာ.. ငိုစရာရှိငိုလိုက်။ ရယ်စရာရှိ ရယ်လိုက်…
ဒါကြီးကို လိမ်နေတာကြီးလို့သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတော့မှာလဲ။
ဇောက်ထိုးပါဆို…….. ဇောက်ထိုးတော့ မြင်မှပေါ့။
koko thant says: ကိုကိုဇောက်ပြောသလို ကျနော်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဗျာ ရှုပ်နေတာပဲ နားမလည်တော့ဘူး
သူကြီးခိုင်ရော ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို ရှင်းပြပါလား
Mon Kit says: မွန်ကစ်တို့တော့ သဂျီးပေးမဲ့ တစ်သိန်း ကို ရနိုင်ဖို့ နောက်မျိုးဆက်သစ် ၂ ဆက်လောက် ချန်ခဲ့မှ ရနိုင်မယ်နဲ့တူတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 258
awra-cho says: တားလဲ တနှစ်ကျော်ပေါ့၊ နှစ်ထောင်ကျော်ပဲ ရှိတေးတယ်ဂျ။ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် လိုက်မန့် မှပဲရတော့မယ်
Comments By Postမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - khin phone - Mr. MarGaသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - kyeemite - ဆူးလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - စနေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - kyeemite - ဆူးနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - စနေ - လုံမလေးမွန်မွန်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - နွေဦး - ဆူးFloral Gift - Macro Series - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအတု - Nyo Win - naywoon niဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - kyeemite - padonmarမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Nyo Win - kyeemiteစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - Foreign Resident - Foreign Residentသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - naywoon niကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - padonmar - ခင်ခရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - padonmar - kaiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - kai - ဦးဦးပါလေရာခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommet“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - uncle gyi - padonmarစည်တော်ကြီး - ko pauk mandalay - ဦးဦးပါလေရာပုညကြိယာဆယ်ပါး - kyaw hteik - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - uncle gyi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - padonmar - BMTM Mdyအဟံ ပထမံ - Ko chogyi - padonmarဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67478 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59496 Kyats )MaMa (58061 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...